Ihe omuma ihe na-ekpughe ihe omuma nke kachasi banyere SEO
N'agbanyeghị na ihe àmà nke ịdịwanye mkpa nke SEO na-eme ka o doo anya,ụfọdụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ ka na-ezere iji SEO maka njikarịcha okporo ụzọ. Otú ọ dị, nchọpụta dịgasị iche iche na-ekwu na ihe abụọ dị mkpa nke azụmahịaKwesịrị ịnwe bụ ọnụnọ ndị ọbịa na ndị njem na njem.
Onye ọkachamara nke Ọkachamara Ọrụ Dijitalụ, Artem Abgarian na-ekpughe akụkọ ọdịnala kachasị emetụta na SEO.
1 - endreinigung nach renovierung. Azụmahịa
Ụlọ ọrụ na-agbanwe ngwa ngwa, na-esite na nwelite algorithm ugboro ugboro.Imirikiti mmelite maka algọridim na-eme kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ọtụtụ mgbanwe adịghị emetụta arụmọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ dị ka hatumadi nke obere tweaks nke nwere ike ọ gaghị enwe mmetụta anya ọ bụla.
2. Usoro mgbagwoju anya
Ụfọdụ n'ime akụkụ nke SEO bụ nkà na ụzụ nke na-emetụta mgbe ụfọdụnjikarịcha na ebe nrụọrụ weebụ na-ewu. Ọ bụ ezie na ihe ka ọtụtụ n'ime SEO na-elekwasị anya n'iche ahịa ahịa siri ike dịka ịchọta isiokwu, na-ekeọdịnaya dị mkpa, ọkwa nlekota oru, na ịtụle okporo ụzọ.
3. Enweghi ike
Ndị mmadụ kwenyere na ịbịanye SEO anaghị adị naahịa n'ihi na mgbe niile mere mere na algọridim na mgbanwe ndị ọzọ. Echiche a abụghị eziokwu dị ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke okporo ụzọsitere na SEO..Ịgụ akwụkwọ raara onwe ya nye ụdị SEO dịka Nyocha Engine Engine na-enyere aka melite ndị ahịa ma mee ka ha maraihe ka dị mkpa.
4. Echiche ogologo oge
Ọ na - ewe oge iji wuchaa ọkwa na ịmepụta ebe nrụọrụ weebụọnụnọ online nke bụ eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha. SEO, Otú o sina dị, na-adịgide, ọ ga-ebetakwa nsonaazụ ọ bụla ma ọ bụrụhaala na ebe nrụọrụ weebụ ahụ zuru ezukachasị mma.
N'ihe kpatara vootu nke SEO, ndi mmadu kwenyere na ọ bughi ihe kwesiri ntukwasi obi.Enweghị njikwa kpọmkwem maka ogo ma ọ bụ okporo ụzọ dị ka PCC. Ka o sina dị, na ịchọta ebe nrụọrụ weebụ ruo oke kachasị SEO,enwere ike inwe nsogbu kachasị mma.
Inweta nsonaazụ kachasị mma chọrọ ego ego, ogena ihe ndi ozo. SEO enweghị onwe ma ọ dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ mgbasa ozi mgbasa ozi akwụ ụgwọ dị ka PPC, ma ọ bụ ịzụta okporo ụzọ na-ejiụzọ ndị ọzọ.
7. Mgbanwe nke Weebụ
Ọ bụ eziokwu na SEO chọrọ ụlọ ọrụ ime mgbanwe ụfọdụna ebe nrụọrụ weebụ ha. Mgbe ufodu, o nwere ike ibudata tweaks ole na ole, ebe ndi ozo na-achogharia mkpokọta a n'ozuzu iji mezuoike. Ihe ọ bụla n'ime mgbanwe ndị a na-atụ aro bụ isi ihe iji nweta ihe mgbaru ọsọ SEO.
Taa, ụlọ ọrụ niile na-eche mkpa ọchụchọ dị mkpaokporo ụzọ. Ndị ahịa na-eji engines ịchọpụta ngwaahịa, ọrụ, ndị na-ere, na ozi. Na-eleghara mkpa ọ dị ịkwado azụmahịa ahụna nsonaazụ ọchụchọ nwere ike ime ka ndị mmadụ nwee ike ịghọ ndị na-asọmpi ka ha wee nwee ike imetụta azụmahịa n'ụzọ ọjọọ.